Chrome 87.0.4280.141 inogadzirisa 16 kukuvadzwa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura yakazozivikanwa kusunungurwa kwe Chrome webhu bhurawuza gadzirisa vhezheni 87.0.4280.141, vhezheni iyo inokwanisa kugadzirisa kunetsekana gumi nematanhatu ayo matambudziko gumi nemaviri anoiswa sengozi.
Saka nekudaro, hapana nyaya dzakakomba dzakaonekwa. iyo inokutendera iwe kupfuura madanho ese ekudzivirira kwebrowser uye unomhanya kodhi pane yako system kunze kwenzvimbo yesandbox.
Iyi yekuvandudza inosanganisira 16 gadziridzo dzekuchengetedza. Pazasi, tinoratidzira kururamisa kwakapihwa nevanoongorora vekunze. ona iyo Chrome peji rekuchengetedza kuti uwane rumwe ruzivo.
Kuwana kune zvinongedzo uye tsikidzi ruzivo zvinogona kuramba zvakatemerwa kudzamara vashandisi vazhinji vavandudzwa nekugadziriswa Isuwo tichachengetedza izvo zvinorambidzwa kana bhagi riripo mune rechitatu-bato raibhurari iyo mamwe mapurojekiti akafanana anoenderana nazvo, asi haisati yagadziriswa.
Uye sekutaura kwevagadziri veChannel, kwete ruzivo rwese nezvekushushikana kunoziviswa:
 Alto CVE-2021-21111: Kusakwanira kutevedzera mutemo muWebUI.
 Alto CVE-2021-21113: Stack buffer inoputika paSkia.
 Alto CVE-2020-16043: Yakakwana data sisitimu pane network.
 Alto CVE-2020-15995: Nyora kunze kwemiganhu muV8.
 Pakati CVE-2021-21116: Audio dhairekita buffer kufashukira.
Zvakare iyo yekuwedzera kwekuwedzera kwakakosha kwemubairo inotaurwa mari yekuziva kusagadzikana.
Uye ndezvekuti mune iyi yekugadzirisa vhezheni nekuda kwekuwanikwa kwekushomeka kweshanduro yazvino, Google yakabhadhara mibairo gumi nematatu inoita $ 13 (mibairo mitatu ye $ 20,000, mibairo miviri ye $ 15,000, mibairo miviri ye $ 7500, uye mubhadharo we $ 6000)
Iyo mibairo mikuru yakabhadharwa yekuona yemahara mushure mekushandisa kushomeka mukodhi inoenderana nekuzadza-auto, kudhonza-uye-kudonhedza minda, uye kugadzirisa media Mubayiro we $ 15,000 wakapihwa nekushandisa mushure mekusununguka kwePayipi API uye SafeBrowsing modhi.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve ichi chinogadzirisa kuburitswa uye mibairo yacho, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni yeGoogle Chrome?
Vagadziri veGoogle vanotaura kuti zvakakosha kuti vashandisi vagadzirise bhurawuza nekukurumidza uye nekukwanisa kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni yebrowser pane avo masisitimu, Vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Chinhu chekutanga kuita ndeche tarisa kana iyo yekuvandudza yatovepo, nokuti unofanirwa kuenda ku chrome: // settings / help uye iwe uchaona iyo ziviso yekuti kune yekuvandudza.
Kana iyi isiri iyo kesi, iwe unofanirwa kuvhara browser rako uye ivo vanofanirwa kurodha pasi pasuru kubva kune yepamutemo Google Chrome peji, saka ivo vanofanirwa kuenda kune inotevera chinongedzo kuti utore pasuru.
Kana kubva kune iyo terminal ne:
Waita kurodha pasi kwepakeji ivo vanogona kuita kunongedza kwakananga neyavanofarira package package, kana kubva kumagumo ivo vanogona kuzviita nekutaipa unotevera kuraira:
Uye kana iwe uine matambudziko nekuvimbika, unogona kuzvigadzirisa nekutaipa unotevera kuraira:
Panyaya yemasisitimu ane rutsigiro rweRPM mapakeji senge CentOS, RHEL, Fedora, openSUSE uye zvigadzirwa, unofanirwa kurodha pasi rpm package, iyo inogona kuwanikwa kubva kunotevera chinongedzo.
Waita kurodha pasi ivo vanofanirwa kuisa pasuru neyavanofarira pasuru maneja kana kubva kumagumo vanogona kuzviita nemirairo inotevera:
Muchiitiko cheArch Linux uye masisitimu akatorwa kubva pairi, senge Manjaro, Antergos nevamwe, tinogona kuisa kunyorera kubva kuAUR zvinyorwa.
Kuti inofanirwa kuve neAUR mubatsiri akaisirwa pane avo masisitimu, Unogona kutarisa chinongedzo chinotevera kwandinogovana zvimwe zvacho.
Ivo vanongofanirwa kunyora iwo unotevera kuraira mune iyo terminal:
Uye wakagadzirira nayo, unenge watoisa kare kana kugadzirisa Google Chrome pane yako system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 87.0.4280.141 inogadzirisa 16 kukuvadzwa